Iran oo dib u fureyso Ganacsiga iyo Goobaha Cibaadada
Khudbad laga sii daayay telefeshinka dowladda ayuu madaxweynaha Iran, Xassan Rouhani ku sheegay in madxafyada iyo dhismayaasha taariikhiga ah dib loo furi doono Axadda berri ah oo sidoo kale uu dalkaasi u dabaaldegayo munaasabadda Ciidul- Fitriga, oo ah dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadan.
Goobaha lagu cibaadeysto oo qaarkood ay ahaayeen meelihii ugu darnaa ee faafista coronavirus ee dalkaasi ayaa iyana dib loo furi doonaa Isniinta.
Rouhani ayaa todobaadkii hore sheegay in masaajidada la ogolaan doono in la furo saddex saacadood oo subaxdii ah iyo saddex saacadood oo galabtii ah.
Dhamaan shaqaalaha dalkaasi ayaa shaqooyinka ku laabanaya Sabtida danbe.
Marxaladda afaraad ayaa ah xakameynta ilaa 10 gobol oo ka mid ah 31 ka gobol ee Iran, halkaasi oo xaaladdu ay soo hagaageyso, baaritaankuna uu sii xoogeysanayo, iyadoo dadka qaba cudurkana laga go’doomin doono bulshada inteeda kale.
Rouhani ayaa sheegay in 88% dadka ugu geeriyooday COVID-19 gudaha dalkaasi ay ahaayeen dad horey xanuuno kale la il-darnaa.
Sida ay sheegeyso xog ay baahisay wasaaradda caafimaadka ee Iran, in ka badan 7,000 oo qof ayaa dalkaasi ugu geeriyooday cudurka COVID-19 iyadoo 130,000 qofna uu cudurkani soo ritay.